musha » COVID-19 Coronavirus
Directory Category: COVID-19 Coronavirus
Inopa chishandiso chekutarisa chinoenderana nemitemo yeCDC yekuongorora covid-19. Kana kuongorora kwapera, inopa mazano ekuchengetwa.
Coronavirus COVID-19 Nyaya Yakaverengeka yeUtah
Ongororo ye COVID-19 Ongororo
Chirevo ichi chinovandudzwa zuva nezuva kwana 1:00 pm Ruzivo pamusoro pezviitiko zveCOVID-19 zvinoshanduka nekukasira, uye rondedzero iyi inogona kusaratidza zvadzokororwa zvakaitwa mushure me1: 00 masikati nemadhipatimendi ehutano eko kana masisitimu ehutano.
Coronavirus Ruzivo rweVana
Inodzidzisa vana pane coronavirus, kuti inopararira sei, uye maitiro ekudzora kupararira.
Batanidza kune gwaro
COVID-19 Etiquette: 6 Zvakajairika Conundrums (Uye Chinyorwa Chinozunguzirwa Pocket)
Iwe unotaurira sei munhu wausingazive kuti ave zvirinani padanho renharaunda? Chii chaunoita iwe kana iko kuseri kwekusangana kamwe kamwe kune mumwe chete akawandisa asina kuvhurwa vashanyi? Ichi chiitiko chinofamba nemitemo mitsva yetsika panguva yeCOVID-19.
kubva Malaka Gharib / NPR
Vhiki rapfuura, ini ndaive mukati mechitoro chiri nyore, uye mumwe wekuendesa aiviga masoda mufiriji asina kupfeka chifukidzo. Zvakaita kuti ndinzwe kusagadzikana. Takanga tiri mune diki, isina mawindo nzvimbo pamwe chete. Dai wekuendesa anga arwara uye achidurura hutachiona, zvaigona kunge zvakapararira nemhepo mukati mechitoro.
Pandakamirira mumutsetse wekutarisa, ndainzwa kushushikana kwangu kuchikura. Chii chandinofanira kuita mune ino mamiriro? Ndinofanira kutaura chimwe chinhu here?
Ndipo pandingave ndakanyatsoshandisa rairo yaElaine Swann, muvambi weSwann Chikoro cheProtocol, an etiquette training institute. Iye anodzidzisa vanhu pahunhu hwakanaka, semuenzaniso, maitiro ekuita hurukuro diki kana iyo forogo yekushandisa patafura yekudya kwemanheru. Zvino, pakati pechirwere checoronavirus, anga achibatsira vanhu kufamba nenzira dzinonetsa dzemagariro - senge yangu chitoro chiri nyore mamiriro.
Kunyangwe tiri kurarama kuburikidza nedenda, anodaro Swann, vanhu vachiri kuda kuitirana nemutsa neruremekedzo - uye "kuzvibata kuti vasagumbura vamwe, kwete kukuvadza manzwiro evamwe vanhu."
Saina Saina Iyo Nyowani Yakajairwa Tsamba
Nhau dzezuva nezuva padambudziko rekonavirus uye batsira kuwana chero chinouya chinotevera. Tiri mune izvi pamwe chete.
Pamwe ndosaka ndainzwa kusanzwisisika nezvekutaura muchitoro - kunyangwe zvangu kuchengetedzeka kwaive panjodzi, ini ndaisada kugumbura wekuendesa. Mushure mekutaura neSwann, ndakadzidza mhinduro mbiri dzandaigona kunge ndakaendesa mune iyo mamiriro. Ndingadai ndakabvunza munhu ane chiremera, mubati wemari, kuti atungamire iye aendesa hurukuro kuti apfeke mask yake. Kana ini ndingadai ndakabuda kunze kwechitoro kudzamara dhirivhari yapera, ndokuzodzokazve mukati zvakare.
Swann, munyori we Let Crazy Be Crazy: Wobva Waremekedza Tora Zvaunoda, Tora Pfungwa Yako, uye Zvinyoro Isa Vanhu Vasina Nzvimbo Munzvimbo Yavo, vakataura neNPR nezve maitiro ekugadzirisa matanhatu matanhatu eECVID-19 conundrums.
Dhinda Uye Peta Yako Pachezvako COVID-19 Etiquette Nongedzo
Iwe unogona kupurinda mini-bhuku - kana zine - uine imwe yetieteti nyanzvi Elaine Swann rairo. Peta iyo uchishandisa mirayiridzo (nerukudzo rweOregonia). Chengeta muhomwe yako yekumashure, kana kupa imwe kushamwari.
Ruoko rwakabata zine rakanzi "A Pocket Guide kune COVID-19 Etiquette naElaine Swann" inoratidza mufananidzo waElaine.
Zine naMalaka Gharib / NPR, Mufananidzo naBecky Harlan / NPR
Ruoko rwakabata zine yakavhurika kumapeji maviri. Rimwe peji rinoti "Shandisa" isu "uye" isu "pakukumbira. Zvinoratidza kufunga pamwe chete kuchengetedzeka kwemunhu wese. ” Peji repiri rinoti "Usadzidzise vamwe nezve kuchengetedzeka kwedenda. Zvinoita kuti vanhu vasatomboda kutevedzera chikumbiro chako. ” Iwo maviri mapeji anoratidza vanhu vachiita madhairekisheni aya.
Ruoko rwakabata zine yakavhurika kumapeji maviri. Peji rekutanga rinoti "Usapurisa maitiro evamwe vanhu kunze kwekunge kuchengetedzeka kwako kuri mungozi." Peji rechipiri rinoti "Bvunza munhu ane masimba kuti abatsire kutevedzera mitemo yedenda." Iwo maviri mapeji anoratidza vanhu vachiita aya marongedzo.
Ruoko rwakabata zine yakavhurika kumapeji maviri. Peji rekutanga rinoti "Ita zvaunogona kuzvidzivirira. Yeuka: Haugone kumanikidza vanhu kuti vachinje maitiro avo, asi unogona kuzvidzora. ” Peji rechipiri rinoti "Ita hurukuro usati waenda kugungano rakatandara nevanhu kuti umise mitemo yepasi." Iwo maviri mapeji anoratidza vanhu vachiita aya marongedzo.
Ruoko rwakabata zine inoratidza peji rekupedzisira. Iyo peji rinoverengwa "Bhonasi Zano: Chengeta chako chakashandiswa mask kubva patafura yekudyira. Chiise… muhomwe, muhomwe, pasi pejira kuitira kuti usvike zvirinyore - Unozoda kuchiisa kana sevha yauya. ” Iyo peji inoratidza vanhu vachiita aya marongedzo.
1 pamusoro 5
1. Ndingaudza sei mumwe munhu - kunyanya mutorwa - kuti adzokere kumashure nekuti munhu iyeye ari padhuze neni?
Swann inoti uyu ndiwo mubvunzo Nha. 1 inomubvunzwa nevanhu. Pfungwa yako yekutanga ndeye kushevedzera kuti, "Dzokera kumashure!" kana kuti, “Ibva pandiri!” anodaro - asi maitiro aya haana kunyatsoremekedza, uye anogona kuwedzera dambudziko.
Pane kudaro, anodaro, edza kushandisa mazwi akadai "isu" uye "isu" mukukumbira. Semuenzaniso, "Ngatiisei zvishoma nzvimbo pakati pedu takamirira mumutsetse." Izvi zvinoratidza kufunga pamwe - urikufunga nezvekuti maitiro ako ari kukanganisa sei hutano hwavo - uye ndinovimba vane hanya nekuchengetedzeka kwako zvakare.
Kana iwe ukakumbira nemutsa, vanhu vangangoita sekukumbira kwako, anodaro Swann. Kazhinji kazhinji, vanhu vanoda kuremekedza vamwe.
Asi kana iwe ukatanga kudzidzisa nezve dziviriro chengetedzo kana kutora toni inokonzeresa, vangangodaro vasina kuda kuita. Vanogona "kunzwa sekunge vari kurangwa" kana kuona chikumbiro chako sekurwisa hunhu hwavo - kuti ivo munhu asingateveri mitemo. Izvi zvinogona kugumbura munhu kana kuita kuti vanzwe vachizvidzivirira - uye pakupedzisira, munhu wacho angaramba chikumbiro chako.
Kutora 1: Ratidza kufunga pamwe.
2. Ko kana ndikabvunza munhu kuti arambe ari kure kana kuisa maski yavo - uye ivo vachiti kwete?
"Ipapo, ita zvaunogona kuti uzvidzivirire," anodaro Swann: Bvisa chiso chako kubva kumunhu iyeye, famba pamusoro pemamita mashoma, famba wakasiyana neimwe nzira.
Kutora 2: Zvidzivirire.
3. Inoita kuti ropa rangu ribike pandinoona vanhu vasiri kutevedzera gwara redenda. Ndinogona kupindira here?
"Kana maitiro avo asiri kukukanganisa, chirega," anodaro. “Vanhu vava kupinda mumakakatanwa aya uye manyemwe nekuti vari kuedza kuti vanhu vatevedze gwara redenda. Mira kuedza kuita izvozvo kana munhu wacho asingade kutevedzera. Unofanira kurega vanopenga vachipenga uye uvasiye vega. ”
Iyo chete nguva yaunofanirwa kutaura kumusoro, anodaro, ndeye kana iri kukanganisa zvakananga kuchengetedzeka kwako. Ipapo iwe unogona kuedza kushandisa imwe yeiyo "isu" uye "isu" mumazano ake pamusoro.
Kutora 3: Ngazviende.
4. Ko kana ndiri pane kuungana kwekunze kure kure uye, mushure memaawa mashoma, vanhu vanotanga kukomberedza mirau zvishoma?
Edza kushandisa "isu" uye "isu" mutauro kana zviri kungoitika nemunhu, anodaro Swann - achiti kumunhu, "Ngatiitei kuti tigare muzvikamu zvedu zvishoma kuno."
Asi kana zviri kuitika mubato, yambira mugamuchiri, anodaro. Munhu anotungamira ane mvumo yekumanikidza denda mirau. Swann anokurudzira kuti: “Ndakaona kuti vanhu vava kutanga kusununguka nemirayiridzo. Ndafunga kuti ndichaunza izvozvi kwauri. ”
Kana iye mugamuchiri akaita chimwe chinhu nezvazvo, saka zvakanaka, anodaro Swann. “Asi kana kusachinja kukasaitika uye usina kugadzikana nenharaunda, zvimonese. Ingoti, 'Unoziva chii - ndiri kuzotungamira kumba izvozvi. Ndakava nenguva yakanaka. ' "
Dzivisa chishuwo chekusvika pane rako sipo bhokisi, anowedzera. "Usaite chiziviso woti, 'Hapana ari kutevedzera mutemo, saka ndiri kuenda' - ipapo rova ​​musuwo pakubuda kwako." Unoda kuve nechokwadi chekuti hukama hwako hunozviita kune rimwe divi redenda, anowedzera.
Kutora 4: Bvisa pachako kubva mumamiriro asina kugadzikana - uye rangarira kuchengetedza hukama.
5. Shamwari yakandikoka kuti ndizotandara. Ndinoziva sei kuti zvakachengeteka kuita saizvozvo? Tingave tisiri pane iro rakafanana peji nematanho eprotocol.
Usaite zvekufungidzira nezvekuti vanhu vari kutevedzera sei nhungamiro, anodaro Swann. Vamwe vanhu, semuenzaniso, vanonzwa vakachengeteka kugara pamba, nepo vamwe vachigara sekunge hutachiona hwanga husipo. Saka bvunza mibvunzo mishoma pamberi, anodaro. Semuenzaniso: “Ini ndinopfeka chifukidziro chekumeso kana ndiri pane vamwe. Iwe unonzwa sei nezvekupfeka kufukidza kumeso? Icho chinhu chauri kuita here? "Iyi ichave nyaya yekuregedzesa vanhu?"
Teerera kune zvavanotaura. "Ipapo tora chinguva kuti udzokere shure uye zvibvunze pachako kana chiri chinhu chaunonzwa kugadzikana nacho," anodaro Swann. “Kana zvisiri, iti, 'Maita basa zvikuru nekundikoka, asi handizokwanisi kukoka vanhu ava.' "
Uye usavasundire kuti vachinje zvirongwa zvavo kuti zvikwane danho rako rerunyararo, anowedzera. “Ino haisi nguva yekumhan'arira shamwari neshamwari dzedu dzemhuri. Pane kudaro, tinofanira kudzora maitiro edu toita sarudzo pane zvakatinakira isu. ”
Kutora 5: Usafunge.
6. BHONASI ZANO
Paunenge uchidya, bvisa mask zvachose, anodaro Swann. Uye, anowedzera achiti, "usaita kuti irembeke panzeve imwe." Iwe unenge uchimanya uye kutsenga uye kunwa uye kutaura munguva yeiyo nguva, saka hazvina musoro kuyedza kuipfeka patafura, anotsanangura.
Asi usatombofunga nezvekuisa mask yako yawakashandisa patafura, anodaro Swann. Kunze kwemajemusi, hunhu hukuru kwete-kwete. Kazhinji, anoti, "hapana chinofanira kuenda patafura kunze kwekudya." Izvi zvinosanganisira nharembozha yako, chikwama, makiyi, ngowani, laptop - uye, zvedi, mask yako.
Nekuchenjera "chiise muhomwe yako, muhomwe kana muhomwe yako. Kana kuti unogona kuzviisa pamakumbo ako pasi pejira rako, ”anodaro. "Nenzira iyoyo inowanikwa nyore nyore kana server yako ikauya pamusoro pako." Rangarira kujekesa kana sevha yako iripo, anodaro, kuti ivachengete zvakare.
Kutora 6: Ndapota usaisa mask yako patafura.
Usakanganwa kupurinda Pocket Pocket kune COVID-19 Etiquette NaElaine Swann. Peta iyo uchishandisa mirayiridzo (nerukudzo rweOregonia).
Tinoda kuda kunzwa kubva kwauri. Tisiye isu voicemail pa202-216-9823, kana email pa
Kuti uwane mamwe Hupenyu Kit, Nyorera kune yedu tsamba.
Iyo podcast chikamu chenyaya iyi chakagadzirwa naSylvie Douglis.
Covid-19 Dzidzo kubva kuU yeU Dept Yeveruzhinji Kuchengetedzwa
Kana iwe uri mupi wezvehutano uchiongorora murwere wefungidziro yenoverengera coronavirus (COVID-19) hutachiona, ndapota tarisa kune iyo UDOH yekuyedza nhungamiro uye iyo UDOH COVID-19 Bvunzo Yekukumbira Chishandiso.
COVID-19: Recursos decomunicación | CDC
Los CDC ofrecen recursos gratuitos, incluidos videos, hojas informativas y afiches. Abajo hay enlace a recursos y herramientas de comunicación actuales, que están disponibles para su uso y distribución.
Inopa ruzivo nezve zvirongwa zvehurumende zvinobatsira kubhadhara bhiri uye rubatsiro rwechinguva.
Maitiro Ekuramba Wakadzikama Panguva yeCoronavirus Kuputika
Inopa ruzivo rwekuti ungabatsire sei kuzvidzivirira kubva kuhutachiona, maneja manzwiro, uye kuseta chaiyo pfungwa.
Yakakosha Yunivhesiti yeUtah Hutano Kugadziridza!
Fonera 801-587-0712 usati washanyira chipatara kune kwakanyanya kupisa kana kukosora zviratidzo.
Ndiani Anofanira Kuedzwa
Coronavirus Vs. Cold / Flu Zviratidzo
Nguva Yokutsvaga Kurapwa
Tsigira Mhinduro Yedu
U weU Hutano Nyanzvi muNhau
Accelerate: Kunzwisisa kweKunaka-Kugara
Kwazvino Coronavirus COVID-19 Info kubva kuHurumende yeUtah
Kana iwe uchinetseka nezve kuti ungave uine COVID-19,
ndapota fonera iyo Utah Coronavirus Ruzivo Mutsetse pa1-800-456-7707.
Zvidzivirire - Utah.gov
Matanho epasi rose ekudzikisira Kupararira kwe COVID-19
Gov. Gary Herbert, Utah Coronavirus Task Force, uye vashandi vehutano vari kutora matanho anoshanda kudzora kupararira kwenoverengera coronavirus (COVID-19) munharaunda dzeUtah. Izvi zviito zvinoshanda kusvika munaKurume 30 uye zvichadzokororwa sezvo mamiriro ezvinhu achida kuti Utahns igare yakachengeteka uye ine hutano.
Kana Iwe Uchifunga Iwe Unogona Kuva COVID-19
Kana iwe uchangobva kufamba kana kuburitswa kune mumwe munhu akayedza zvakanaka kune COVID-19 uye uchiona zviratidzo zvakaita sefivha, kukosora, kana kufema kwekufema, iwe unofanirwa kutsvaga kurapwa kwekukurumidza. Ive neshuwa yekuudza chiremba wako nezve iwe uchangobva kufamba, uye dzivisa kusangana nevamwe vanhu iwe uchirwara.
Nzira dzekudzivirira dzeMunhu wese
Wese munhu anogona kutora matanho ekumisa kupararira kwechirwere, senge:
Dzivisa kufamba kusiri-kwakakosha kuenda kuChina chero coronavisus hotspots.
Dzivisa kufamba uye kusangana nevamwe vanhu kana iwe uchirwara.
Vhara muromo wako nemhino netissue kana ruoko rwako (kwete maoko ako) kana uchikosora kana kuhotsira.
Geza maoko kazhinji nesipo nemvura kwemaminitsi makumi maviri. Shandisa doro-based ruoko sanitizer kana sipo nemvura zvisipo.
Dzivisa kusangana nevanhu vanorwara.
Dzivirira Bhizinesi Rako, Vashandi
Varidzi vebhizinesi nevashandirwi vanogona kunge vachinetsekana nezvekuti iyo koronavirus inoverengeka ingakanganisa sei nzvimbo yavo yebasa, uye vashandi vanogona kunetsekana nekushurikidzwa kana rusarura.
Dzvanya apa kuti uwane mazano anokurudzirwa ekuchengetedza nzvimbo yako yebasa.
Iko hakuna chaiwo marapirwo ezvirwere zvinokonzerwa nevanhu coronaviruses. Vazhinji vanhu vane zvakajairika zvevanhu coronavirus chirwere vachapora vasina kurapwa. Nekudaro, iwe unogona kuita zvimwe zvinhu kudzikisira zviratidzo zvako:
Tora marwadzo nefivha mishonga (Chenjedzo: Usape aspirin kuvana).
Shandisa kamuri humidifier kana kutora shawa inopisa kuti ubatsire kudzora huro uye kukosora.
Kana iwe uchirwara zvinyoronyoro: inwa mvura yakawanda, gara kumba, uye zorora.
COVID-19 SLC NZVIMBO DZINOGONESESA
Ndokumbirawo ushandise ino webhusaiti kusaina kuzvipira, kukumbira rutsigiro, kana kuwana ruzivo nezve zviwanikwa zvemuno nezvakatsiviwa.
Zvemagariro & Hunhu Hwehutano Panguva yeCOVID-19 (Ndira 28, 2021)
Chirevo kubva kuUtah department rehutano.
Batanidza kune iyo Adobe PDF Gwaro.
U weU Hutano Covid-19 / Coronavirus ruzivo
Pane peji (Ona webhu kero / URL pazasi):